နည်းပညာဆိုင်ရာစုစည်းမှုများ: Windows 8 Bootable USB လေးကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးကြည့်ရအောင်
Windows 8 Bootable USB လေးကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးကြည့်ရအောင်
“Windows 8” ဟာအခုဆိုရင် တော်တော်များများကပြောဆိုနေကြပါပြီ။ Window 8 ကို အခုကျနော်တို့ USB Stick ကနေ Install လုပ်ကြည့်ကြရအောင်ဗျာ....အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ Windows 8 က တရားဝင်တော့မထုတ်သေးပါဘူး။ဒါပေမယ့် မကြာမီကပဲ Windows 8 Developer Version ကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ရဲ့ Computer ပေါ်ကို Windows 8 ရဲ့Dev. version လေးကို တော့ အလွယ်တကူ Install လုပ်နိုင်ပါပြီ။
ကျနော်တို့အနေနဲ့ Windows7USB/DVD download tool ကိုသုံးပြီးတော install လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် အောက်က လင့်မှာ အရင်ဒေါင်းလိုက်ပါ။
Windows 8 developer version ကိုလိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ။
Windows 8 developer version 32Bit
Windows 8 developer version 64Bit
၁) After installing Windows7USB/DVD tool on your computer open it.
၂) Now click on “Browse” button and select the previously downloaded windows 8 ISO file and click ok.
၃) To makeaWindows 8 USB stick you need to select “USB Device” button but you can also copy it onaDVD by clicking on “DVD” as shown in image below.
၄) Now, you need to chooseaUSB device. SelectaPen drive (Minimum 4GB) and click on “Begin copy” button.
7. Now Windows7USB/DVD Tool will format your pen drive and start copying Windows 8 Files. It may take few minutes.
အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ Computer ကို Restart ပေးပြီး Windows 8 Developer version တင်ခြင်းကိုစတင်လို့်ရပါပြီဗျာ။ ဒါပေမယ့် BIO မှာ First Boot ကိုတော့ USB ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်။
Posted by P Kyaw Swa at 1:11 AM